အိန္ဒိယက ၎င်း၏ ပြည်တွင်းရေးအကြပ်အတည်း၌ မိမိတို့အား ဆွဲမထည့်ရန် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တောင်းဆို။ အိန္ဒိယနှင့် မဟာမိတ်ရွှေခေတ်ဟု၎င်း၊ မြန်မာ-တရုတ်-ရုရှားနှင့် ဂျပန်ကဲ့သို့ ဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီအရေး ဆွေးနွေးရန် လက်ပေါက်ကပ်သော တိုင်းပြည်ဟုလည်း ပြောကြ။ – H2Oupdatenews
အိန္ဒိယက ၎င်း၏ ပြည်တွင်းရေးအကြပ်အတည်း၌ မိမိတို့အား ဆွဲမထည့်ရန် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တောင်းဆို။ အိန္ဒိယနှင့် မဟာမိတ်ရွှေခေတ်ဟု၎င်း၊ မြန်မာ-တရုတ်-ရုရှားနှင့် ဂျပန်ကဲ့သို့ ဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီအရေး ဆွေးနွေးရန် လက်ပေါက်ကပ်သော တိုင်းပြည်ဟုလည်း ပြောကြ။
အကြပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အိန္ဒိယ၏ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စမှာ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အား ပြဿနာရိုက်ခတ်လျှက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အေကေအဗ္ဗဒူမိုမန်က ပြောဆိုသည်ဟု Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဒါကာမြို့ အမျိုးသားသတင်းမီဒီယာကလပ်တွင် ကျင်းပသော ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သံတမန်ရေးရာ သတင်းထောက်များအစည်းအရုံး ( DCAB ) နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၌ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုရာတွင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်လက်ရှိအစိုးရသည် လူထုဆန္ဒမဲဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသော နိုင်ငံရေး သက်သက်အစိုးရဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အစိုးရက နိုင်ငံသားများအား ပြန်ရှင်းပြရသည့်အဖြစ်မျိုးဆိုက်အောင် အိန္ဒိယ အနေဖြင့် မလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ထိုအတိုင်းအတာအထိ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အား ဆွဲမထည့်ရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက တောင်းဆိုကြောင်း သိရှိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နှင့် အိန္ဒိယ၏ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမှာ မဟာမိတ်ရွှေခေတ် ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ အိန္ဒိယသည် မြန်မာကဲ့သို့ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်းရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ ) အရေးနှင့်ပတ်သက်လျှင် ဆွေးနွေးရန် လက်ပေါက်ကပ်သော တိုင်းပြည်မျိုးမဟုတ်ကြောင်း မိုမန်က ဆက်လက် ခိုင်းနှိုင်းခဲ့သည်ဆို၏။
အဆိုပါ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၌ ယခင်ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးရာအတွင်းဝန်ဟောင်း တူဟစ်ဟူစိန်က ပြောဆိုရာတွင်မူ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီအရေးနှင့်ပတ်သက်လျှင် တရုတ်- အိန္ဒိယနှင့် ရုရှားတို့သည် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ဘက်တွင် ရှိမနေကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးသည်။
ဂျပန်သည်ပင် ( ၎င်းတို့နည်းတူ ) ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နှင့် အလှမ်းဝေးလျှက်ရှိကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီအကြပ်အတည်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာတွင် ၎င်းနိုင်ငံများအား သံတမန်နည်းလမ်းအရ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ဘက်ရောက်လာစေရေးမှာ လုံး၀ စိန်ခေါ်ချက်အဖြစ် တည်ရှိနေကြောင်း၊ အိန္ဒိယသည် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်၏ ရင်းနှီးသော တိုင်းပြည်ဟု ဆိုသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားတွင် အိန္ဒိယက ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တို့အား ပစ်သတ်လျှက်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ၎င်း၏မိတ်ဆွေနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားတို့အား ပစ်သတ်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘယ်နေရာတွင်မျှ မရှိပါကြောင်း တူဟစ် က ဆွေးနွေးသည်။
ဒါကာတက္ကသိုလ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဌာန ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒဲဝါဟိုစိန်ကမူ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယ အားပြိုင်မှုအကြားတွင် ကောင်းကောင်းကြီး စိန်ခေါ်ခံနေရလျှက်ရှိကြောင်း ဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးသည်။
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးရာအတွင်းဝန် ( လက်ရှိ ) နှင့် DCAB ဥက္ကဋ္ဌတို့က နိဂုံးချုပ် စကားပြောကြားသည်။
(( ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည် အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တွင် ရုန့်ရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလျှင် ဘက်လိုက်ဖော်ပြသည်ဆိုသော သတင်းထောက်တို့မှာ အမြဲတန်း အရိုက်ခံရလေ့ရှိသည်။ ထိုမျှမက သတင်းစာတိုက်များကိုပင် လူစုလူဝေးဖြင့် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရတတ်သည်။ ဥရောပနိုင်ငံများဖြစ်သော ပြင်သစ်-ဂျာမနီ-ယူကရိန်းတို့၌လည်း အလားတူ တွေ့ရပါသည်။
“ အိန္ဒိယမြေပေါ်မှ ခြကောင်နှင့်တူသော ခိုးဝင်များကို မောင်းထုတ်ရေး “ ကြွေးကြော်သံဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလာသော ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေး BJP ပါတီ မိုဒီအစိုးရ၏ CAA မှာ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အစိုးရအား ထိုးနှက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်မီဒီယာများက ရေးသားကြပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာတွင် အိန္ဒိယပါလီမန်က နိုင်ငံသားခံယူခွင့် နောက်ဆက်တွဲပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကြမ်း CAA ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါဥပဒေအရ ၂၀၁၄-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁-ရက်နေ့မတိုင်မီ ပါကစ္စတန်-ဘင်္ဂလား ဒက်ရှ်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းနယ်မြေ အစိတ်အပိုင်း၌ အခြေချနေထိုင်သူများ အား နိုင်ငံသားပြုခွင့်ပေးထားသည်။ သို့သော် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရရှိနိုင်သူများမှာ ဟိန္ဒူ-ခရစ်ယာန်-ဆစ်ခ်-ဗုဒ္ဓဘာသာ-ဂျိန်းနှင့် ဇိုရိုအက်စတာဘာသာဝင်စသည့်ဖြင့် ဘာသာဝင် ၆-မျိုးတို့အတွက်ဖြစ်သာဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ပါဝင်ခြင်းမရှိချေ။
အိန္ဒိယ၌ ယမန်နှစ် သြဂုတ်လကတည်းကပင် နိုင်ငံအရှေ့ဖျား ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နှင့် ထိစပ်နေသော အာသံပြည်နယ်တွင် လူဦးရေစစ်ဆေးရာ မွတ်စလင်အများစုဖြစ်သော လူပေါင်း ၁.၉ သန်းတို့မှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် အတည်ပြု ရန် ခိုင်လုံခြင်းမရှိသူများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၉- ဒီဇင်ဘာတွင် CAA ကို ပါလီမန်က ပြဋ္ဌာန်းခြင်းကြောင့် အာသံပြည်နယ်မှ စတင်သည့် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပွဲများသည် ရက်ပိုင်းအတွင်း အိန္ဒိယမြို့ကြီးများသို့ ပြန့်ှနှံ့သွားခဲ့ပြီး အဓိကရုန်းများ ကြို့ကြားဖြစ်ပွားသည်။ ဇန်နဝါရီလ၌ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း ပါကစ္စတန်နယ်စပ် ဂျမူးနှင့် ကက်ရှ်မီးယားတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာလာသော ရိုဟင်ဂျာများဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့ဖာသာပြောဆိုသူများ ဝင်ရောက်နေထိုင်လျှက်ရှိကြောင်း၊ သတင်းထွက်ပေါ်သည်။
အာသံပြည်နယ်ရောက် နိုင်ငံမဲ့ မွတ်စလင်အများစု ၁.၉ သန်းအနက် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံသားများကို ပြန်လည်ခေါ်ယူရန် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နှင့် အိန္ဒိယတို့ ညှိနှိုင်းလျှက်ရှိရာ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ကလည်း ၎င်းတို့နိုင်ငံသား မဟုတ်လျှင် လက်မခံဟု ငြင်းဆန်လျှက်ရှိပါသည်။ အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ၂-နိုင်ငံလုံး၏ တရားဝင်လူမျိုး စာရင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ မရှိချေ။ ( အောက်-၉၊ ၂၀၁၉။ Ukhia News & Dhaka Tribune “ Rohingya NID fraud: CEC says EC not at fault.” ကို ရှု့ )
အိန်ဒိယသို့ အမရေိကနျသမ်မတဒေါျနယျထရမျ့ရောကျရှိရကျ မတိုငျမီ ဖဖေောျဝါရီ ၂၃-ရကျနေ့တှငျ နယးဒလေီ၌ CAA ကနျ့ကှကျဆန်ဒပွပှဲမြားမှ ရုနျ့ရငျးဆနျခတျဖွဈပှားသညျ။ လူ ၄၆-ဦးသဆေုံးပွီး ဟိန်ဒူ-မှတျစလငျ အဓိကရုနျးအဖွဈ အနောကျမီဒီယာမြားက ဖောျပွကွသညျ။
ဆန့်ကျင်ဘက်လူစုလူဝေးတို့ နှစ်ဖက် အသေကြေတိုက်ခိုက်ကြရာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အချိန်မီကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းမရှိ၊ ဗလီနှင့် မွတ်စလင်တို့ပိုင် ဈေးဆိုင်- နေအိမ်များ ဖျက်ဆီးခံရသည်ကို နယူးဒေလီရဲတို့က ဟန့်တား အရေးယူရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်အပြင် ဟိန္ဒူများဘက်မှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြောင်း BBC က ယမန်နေ့ရေးသားသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( Dhaka Tribune., March 4th, 2020,” Momen: India’s internal problems affect Bangladesh. By: Mehedi Al Amin. “ ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)))
#အိန္ဒိယ-ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်မဟာမိတ်ရွှေခေတ် #အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဥပဒေပြင်ဆက်ချက်နောက်ဆက်တွဲ #နယူးဒေလီဘာသာရေး အဓိကရုန်း
Previous Previous post: တာဂျစ်ကစ္စတန်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သောကြာနေ့မှစတင်၍ နေအိမ်၌သာ ဝတ်ပြုကြရန် အမိန့်ထုတ်။ အီတလီသည် တရုတ်ပြင်ပတွင် သေဆုံးသူအများဆုံးဖြစ်လာ။ တရုတ်ပြင်ပ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နှုန်းမှာ နေ့စဉ် ၉ ဆ မြင့်တက်နေဟု WHO ပြောဆို
Next Next post: တူရကီပါလီမန်တွင် ဆီးရီးယားစစ်ပွဲကိစ္စနှင့် လွှတ်တော်အမတ်အချင်းချင်း လက်သီးချင်း ယှဉ်ပြိုင်တင်သွင်းခြင်းဖြင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး